indlu yamatye yendabuko yaseCroatia - I-Airbnb
indlu yamatye yendabuko yaseCroatia
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguIvona
Le yindlu yamatye yaseMeditera yeminyaka engama-200 emi embindini wendlela phakathi kweDubrovnik kunye neSplit. Ijikelezwe ngowona manxweme amahle eCroatia kunye nendalo engakhange ichukunyiswe ilungele ukukhwela ibhayisekile, i-kyting, i-paddle surfing, ukudada elwandle, echibini kunye neengxangxasi.
Yindlu yamatye yeMediteranian yeminyaka engama-200 ephakathi kweDubrovnik kunye neSplit. Indawo entle kakhulu ukonwabela i-byking, i-kyting, ukuqubha echibini naselwandle kunye nolona lwandle luhle kakhulu e-croatia. Indalo emangalisayo engachukunyiswanga nayo yonke into oyifunayo kufutshane.
Indlu ibekwe nje kwindlela ekhokelela malunga ne-7 yamachibi e-Bacina alungele uhambo olude kunye nokukhwela ibhayisekile. Iilwandle ezintle kakhulu eCroatia ziyimizuzu kude nendlu. Ulwandle olukufutshane elwandle yimizuzu eyi-7 yokuhamba ukusuka endlwini kunye nendawo yokuqubha echibini imizuzu eli-10 yokuhamba. .Kyting sand beach in delta 10min ngemoto .tennis terrain 1min. Dubrovnik 90min. I-Medjugorje 35min, Yahlula i-60 min. Iingxangxasi zeKravice 30min
Umbuki zindwendwe ngu- Ivona
Dostupni smo namagama abhalwe phantsi
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Baćina